Lanonana fitokanana ny lalana mampitohy an’Antsiranana sy Ramena – METFP
Anisan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, izay notarihin’ny Praiministra NTSAY Christian, tonga nanototra ny fitokanana ny lalana mampitohy an’Antsiranana sy Ramena ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’asa – Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella –. Lanonana teo ambany fiahian’ny Filoham-pirenena Malagasy – Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA – izay notanterahina ny Asabotsy 11 Septambra 2021. Fitokanana izay niarahana ihany koa tamin’ny Filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena – Ramatoa Jocelyne Maxime – sy ireo manam-pahefana maro tao an-toerana.
Taorian’ny fitokanana ity lalana mirefy 20 km ity, dia nisy ny diabe sy hazakazaka, nandray anjara feno tamin’izany Ramatoa Minisitry ny ETFP, ny Talem-paritry ny ETFP Diana – Andriamatoa BEMENA Albert – sy ireo mpiara-miasa eo anivon’ny fitalaivam-paritra sy ny ivon-toeram-panofanana.
.Ankoatra izay dia nitsidika ireo tranohevan’ny Ivon-toeram-panofanana roa ny Ministra, dia ny CFPF sy ny CFP Antsiranana. Tranoheva noentin’izy ireo nampiratiana ny asa fampianarana nataon’ireo mpiofana, toy ny confiture, ny mofomamy, ny akanjo…
Nandritry ny fiarahana miala voly teny amin’ny amoron-dranomasina Ramena, izay namaranana ny lanonana fitokanana ny lalana, moa no nampisehoana izany vokatry ny fampiarana nataon’ireo ivon-toeram-panofanana roa ireo izany.